विना भट्टराई | कात्तिक २१, २०७६ बिहिबार | 0
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा धेरैको नजर परेको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि यहाँ प्रनिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त छ । अधिकारी कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
यस निर्वाचन क्षेत्रका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), समाजवादी पार्टी, विवेकशील नेपाली दललगायतले आ–आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन् । सबैभन्दा पछि कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा नेकपाले अधिकारीकै पत्नी विद्या भट्टराई उम्मेद्वार बनाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई अगाडि सारेको छ । साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उम्मेदवार बनाइरहँदा विवेकशील नेपाली दलले चाहिँ जमुना शर्मालाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । त्यस्तै राप्रपाले रोमबहादुर भण्डारीलाई र समाजवादी पार्टीले धर्मराज गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
कास्की नेकपाको बलियो पकड भएको जिल्ला मानिन्छ । यस जिल्लाबाट तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारीले लगातार तीनपटक चुनाव जित्नुभएको थियो । अहिले नेकपाले उहाँकै पत्नीलाई उम्मेदवार बनाएका कारण पनि कांग्रेसका लागि यो क्षेत्र ‘डेन्जर जोन’मा छ ।
नेकपाले विद्यालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेका कारण ‘डेन्जर जोन‘बाट बच्न कांग्रेसले यस क्षेत्रमा ‘ह्याभी वेट’ उम्मेदवार उठाउने सम्भावना औंल्याइएको थियो । यद्यपि, कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । जेहोस्, कांग्रेसका लागि यो क्षेत्र त्यति सुरक्षित देखिदैन ।
कस्तो छ चुनावी अंक गणित ?
प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भयो ।
अहिले नेकपाबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी विद्या तत्कालीन एमालेकी नेतृ हुनुहुन्छ । अहिले दुई पार्टी एक भएका कारण विद्यालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी दुबै पार्टीका समर्थकको मत खस्छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग कांग्रेस ८ हजार ५ सय ४६ मतअन्तरले पराजित भएको थियो । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका उम्मेदवार देवराज चालिसेको पक्षमा १८ हजार ६ सय ६१ मत खसेको थियो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कुल ७० हजार ६ सय ५१ मतमा ४९ हजार ९ सय १३ मत खसेको थियो । जसमध्ये ४८ हजार ४ सय ४९ मत सदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । जहाँ १४ सय ६४ म बदर भएका थियो ।
गत निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका १३ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कसलाई कति मत ?
रवीन्द्र अधिकारी (एमाले) २७, २०७
देवराज चालिसे (नेपाली कांग्रेस) १८,६६१
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ (विवेकशील साझा) ८४३
टेकनाथ भण्डारी (माले) ५३९
रत्न भट्टचन (फोरम नेपाल) ३४०
दीपक भण्डारी (नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल) २८३
ज्ञानराज गुरुङ (मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन) १३०
निर्मल खत्री (स्वतन्त्र) ११९
दालकुमारी खत्री (राष्ट्रिय जनमोर्चा) १०८
कर्णबहादुर पुन (देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल) ८२
लक्ष्मी विश्वकर्मा (नेपाल दलित पार्टी) ६५
उमा दर्लामी ( राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) ५१
बालकुमारी राई (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) २१
अहिले यस क्षेत्रमा करिब साढे १५ सय नयाँ मतदाता थपिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदाता रहेकोमा अहिले मतदाता संख्या ७२ हजार २ सय पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा फराकिलो मत अन्तरले पराजित भएको कांग्रेसलाई यसपटक विजयी हुन उम्मेदवार नबनेका साना पार्टी, बदर मत संख्या र नयाँ थपिएका मतदाताको भोट जोड्दा पनि अपुग देखिन्छ ।
साझाकी उम्मेदवार केसी कांग्रेसकी पूर्व सदस्य
साझा पार्टीबाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेकी रजनी केसी कांग्रेसकी पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले साझा पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस परित्याग गर्नुभएको थियो । केसी कांग्रेसकी पूर्व सदस्य भएका कारण उहाँका केही समर्थकको भोट साझा पार्टीलाई खस्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यस क्षेत्रबाट अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा ८ सय ४३ मत प्राप्त गरेको साझा पार्टीको मत यो पटक बढ्ने देखिन्छ । रजनी कांग्रेसमा हुँदा उनका समर्थक बनेका मतदाताले यो पटक साझा पार्टीलाई भोट दिने प्रष्ट छ ।
पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाहीप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । यतिबेला नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरेहेको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको जनताको वितृष्णाको विकल्प आफ्नो पार्टी बन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ । जनताले निकै ठूलो अपेक्षाका साथ बहुमतको सरकार बनाए पनि त्यसको उपलब्धि नदेखिएका कारण अबको निर्वाचनमा जनताले त्यसको विकल्प खोज्ने कांग्रेसका एक नेताले दैनिक अनलाई डटकमलाई बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय भएका विभिन्न संघसंगठनको चुनावी मत परिणामका आधारबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने विस्तारै सत्तारुढ दलबाट जनताको विश्वास उठ्दैछ । यो भनेको जनताले त्यसको विकल्प खोज्नु हो जसमा हामी पर्छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कास्की क्षेत्र नम्बर २ पनि हाम्रा लागि पक्कै असजिलो छैन ।’
#रविन्द्र अधिकारी #कास्की २ #उपनिर्वाचन